RAADONLINE IYO CAAFIMAADKA : FAA’IIDOOYINKA CAAFIMAAD EE GEEDKA QURACA LA DHAHO
15th August 2016 by A.lahi Leave a Comment
Raadonline.net waxaa uu kuusoo gudbinayaa barnaamijyo caafimaad oo ah kuwo waddankeenna si fudud aad uga heli karto ayaga oo aan lagaa iibinayn waxaana bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ka faa’iidaystaan faa’iidooyinka aannu uso gudbinayno.
faa’iidooyinka caafimaad ee geedka quraca
Geedka quraca ama aqabka wuxuu aad ugu badan yahay dhulka Soomaalidu ay degto, Soomaaliya, Ethiopa, Kenya iyo Jabuuti ama haddii si kale loo dhigo Geeska Afrika.
Haddana dadka Soomaalidu aad uguma faa’iideystaan waxtarka caafimaad ee geedkaan uu leeyahay.
Geedkaan dhammaan qaybihiisa kala duwan waxaa loo isticmaalaa caafimaad ahaan, sida xabagtiisa, caleentiisa, qoloftiisa, iyo mirihiisaba.
Faa’iidooyinka caafimaad ee geedka quraca.
1) waxaa ku badan liilanka(fiber), taasoo uu ka caawiyo jirka inuu kor u qaado heerka kolostaroolka fiican(HDL), waxaa ku jira geedkaan maadooyin gaar ku ah isaga oo sunta ka saara jirka.
2) qolofta geedka quraca waxaa loo isticmaalaa inuu hagaajiyo dheefshiidka jirka, iyo inuu yareeyo finanka maqaarka ka soo baxa, waxaa kale oo ay baabi’isaa xanuunka. Hadii cabbid ahaan loo isticmaalana waxay baab’isaa xanuunada ku dhaca habdhiska neefsiga iyo dheefshiidka, sidoo kale xanuunada la xiriira kaadi mareenka.
3) dheecaanka geedka quraca waxaa ku jira maaddo sonkoreed u fiican caabuqa, aadna wax tar ugu ah habdhiska dheefshiidka.
4) wuxuu daawo u yahay geedkaanu dadka qaba nooca sonkoroowga ee loo yaqaano (type 2 diapetes).
5) waxaa kale oo geedkaan uu wax u taraa dadka cayilan oo wuxuu la dagaalamaa cayilka.
6) qolofta geedka quracu waxaa ku jira maadooyin dila fungiga(antifungal), jeermiska iyo xanuunka. waxaa ku jira maadooyinka jirka sunta ka saara(anti-oxident) oo muhiimad weyn u leh dadka qaba cudurada wadnaha. Sidaa darteed geedka quracu wuxuu u fiican yahay dadka qaba dhiig karka.
7) caleenta geedka quraca haddii inta la tumo la saaro foolka ama wejiga wuxuu baabi’iyaa madax xanuunka.
8) haddii la mariyo sidoo kale nabarada findoobka wuu baabi’iyaa
9) waxaa kale oo geedkaan lagu daaweeyaa qufaca iyo qaboowga.
10) xabagta geedka quracu waxay daawo u tahay dhammaan cudurada kelyaha.
11) geedkaan wuxuu daawo u yahay cudurada ku dhaca mindhicirada.
Waxyeelada geedka quraca
mararka qaarkood isticmaalka geedka quracu wuxuu keeni karaa waxyeelo yar, waxaa ka mid ah inuu gaas keeno xaaladaha qaarkood, sidoo kale wuxuu keeni karaa fuurid iyo shuban.
Dadka aleerjigu uu ku kaco xaaladaha qaarkood waxaa laga yabaa in uu sii kiciyo geedkaanu, weliba dadka qaba neefta waa inay taxadar muujiyaan, sidoo kale dadka qaata daawooyinka ay ku jiraan maadada (tannin) waa inayan isticmaalin geedkaan.